मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनीबाटै कामदार ठगिने क्रम बढ्दो - Everest Dainik - News from Nepal
मलेसियामा रोजगारदाता कम्पनीबाटै कामदार ठगिने क्रम बढ्दो
उमेश बन्जाडे, मलेसिया । लाखौं नेपाली युवाका लागि रोजगारीको गन्तव्यका रुपमा परिचित मलेसिया पछिल्लो समय नेपालि मजदुरहरुको हकमा थप कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले मलेसियासँग महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्झौता भएको दावी गरिरहँदा मलेसियाको श्रम बजारमा नेपाली युवाहरु दैनिक विभिन्न समस्याको चंगुलमा फसेर देश फर्किरहेका छन् ।
भर्खरै मात्र नेपाली जनप्रगतिशल मोर्चा मलेसियाले त्यस्तै अप्ठ्यारोमा परेका एक नेपाली मजदुरको उद्वार गरेको छ। मोर्चाले विगत १८ महिनादेखि कम्पनीकै लापरबाहीले समस्या झेल्दै आएका शारदा नगरपालिका ४ सल्यानका लुट बहादुर थापालाई उद्वार गरेको हो । थापा विगत दुईवर्ष अघि रोजगारीका लागि काठमाडौंको सामाखुसीमा अवस्थित बि. एस. ओभरसिज प्राली बाट मलेसियाको ‘Expoam security services’ नामक सेक्युरिटी कम्पनीमा आएका थिए ।
याे पनि पढ्नुस ३१ जनासहित पर्यटक चढेको डुंगा सम्पर्कविहीन
जसोतसो काम गरेर पहिलो वर्ष बिताएका थापालाई दोस्रो वर्षको भिषाका लागि स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने भयो। मेडिकल रिपोर्टले स्वास्थ्यमा अनफिट देखायो। त्यसो भएको खण्डमा कुनैपनी मजदुरहरु कम्पनीकै रोहवरमा तुरुन्तै स्वदेश फर्किन पाउने प्रावधान छ। यद्यपि त्यो विषयमा जानकारी नै नगराई कम्पनीले निरन्तर काम गरायो। अठार महिनापछि थापाको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएर उपचारका लागि निवेदन दिँदा मात्रै मेडिकल अनफिट भएकोले बाहिर जान नमिल्ने अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपुर्ण जवाफ कम्पनीले दियो । पिडित थापाले उपचार नगर्ने भए नेपाल फर्काउन गरेको प्रस्तावमा उल्टै पाँच हजार रिंगिट रकम (नेपाली सवा लाख) तिर्नुपर्ने धम्कीपूर्ण चेतावनी दियो।
याे पनि पढ्नुस मलेसियामा दुई महिनामा ५४ नेपालीको मृत्यु
कम्पनीको रवैयाले आजित बनेका लुट बहादुरले नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा मलेसियालाईलाई जानकारी गराए पश्चात् हालै उनी नेपाल फर्किएका छन् । जनप्रगतिशिल मोर्चा मलेसियाका अध्यक्ष प्रेम घर्तीमगर विस्फोटले मलेसिया स्थित नेपाली राजदुतावासको ध्यानाकर्षण गर्दै समन्वयन गरिए पछी आफुहरु उद्वारमा सफल भएको जानकारी दिए।
रोजगारीका लागि मलेसिया आएका नेपाली युवाहरु रोजगारदाता कम्पनी बाटै ठगिने क्रम अहिले ह्वात्तै बढेको छ। उनिहरुले नेपालका दलाल र म्यानपावरलाई पोसेर मात्रै हुँदैन, मलेसिया भित्रीए पछि स्वयं कम्पनीलाई समेत महिनौंको तलब सुविधा विभिन्न शिर्षकमा दान गर्नुपर्छ । त्यो बाहेक असुरक्षा र महिनौंसम्म तलब नपाउने समस्या त छँदैछ । यसैको उपज स्वरुप मलेसिया सरकारले अवैधानिक कामदार नियन्त्रणका लागि जतिनै शक्तिशाली कार्ययोजना ल्याए पनि अहिलेसम्म विफल बनेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस मलेसियामा संसद् विघटन
प्रत्येक महिना कम्पनी छाडेर अवैधानिक हुनेहरुको सङ्ख्या डरलाग्दो छ। त्यसमा पनि नेपाली मजदुरहरुमा यो व्यापकता अझ बढ्दो छ। धन्न रोजगारीकै लागि मलेसिया आएका केही मजदुरहरुको सक्रियतामा गठित संगठन र मोर्चाहरुले बेलाबखतमा समस्यामा परेका मजदुरहरुको उद्वार र राहतमा दिल खोलेर सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । त्यसले पनि केही सहजता महसुस भएको अन्तर्राष्ट्रिय रोल्पाली सेवा समाज मलेसियाका महासचिव अर्जुन घर्ती मगरको भनाइ छ।
ट्याग्स: malesiya, nepali kamdar